Daalaco xigmadda maanta |
Daalaco xigmadda maanta
A–Juxa oo dameer saaran ayaa wuxuu soo hormaray koox ay saaxiibo yihiin, waana salaamay mid faduulinayay oo ku yiri: markii hore kuma garan (fahmin) in aad juxa tahay, laakin dameerkaaga ayaan gartay ( fahmay). Markaas ayuu Juxa isaga oo aan ka xanaaqin ku yiri: taasi waa runtaa oo dameeradu ayagaa is yaqaan… ( kuwa saxiixay heshiiska is afgaradka MoU iyo kuwa loo saxiixay ayagaa iska kaa garan og). Fiiri : sawirka 1 aad. Xasuuso gabaygii Salaan Carabeey: Badda ood dhiibtaa, waa dhib aad u abuurtay dhalinta birrito. Fiiri: sawirka 2aad.
B–1992dii ayaa koox bililiqadoon ahi yimaadeed waddada Via Rome (Xamar weyne) taa oo dadkii daganaa isaga qaxeen, badanaa waxaa guryaha looga tagi jiray hal ruux oo waayeel ah, waxa ay arkeen islaan waayeel ah oo daaqad kore ka soo fiirinee, kor ayeey u fiiriyeen waxayna ku yiraahdeen, yaa kula jooga guriga. waxa ay ku tiri: igaarkeey kALIGEEY iyo KARIIMKEEY ayaa joogna. kii madaxda u ahaa kooxda ayaa ku yiri: labadiinuba soo daga……. Ileyn weligii ma maqal kalmadda Kariim. ( masuuliyiinta marka la dhaarinayo hala weeydiiyo 99ka magac ee ALLAAH inta uu ka yaqaan si loogu dhaariyo).
C–Nin reer waqooye ahaa oo darawal ah ayaa 1965kii tagay magaalada kismaayo, wuxuuna hore u maqli jiray kismayo Ragga waa la sixraa oo dibi ayaa laga dhigaa, beerahaana lagu fashaa. Galab isaga oo maqaayad horteeda shaah ku cabaya ayaa waxaa soo ag istaagay dibi, ninkii ayuu dibigu fiirayay, waana ka gudbay, dibigii ayaa mar kale soo noqday oo haddana fiiriyay: Ninkii ayaa ku cararay Gaarigii uu waday isagoo leh: now ,now iga waloo wuu igaranayaa, malaha waa darawal reer waqooyi ah oo iga kasoo horeeyay. ( siyaasiyoow reer waqooyi horaa loo fiijiyee, yaan looga sii darin walaalaheena)…..maantana dhalinyarada Mogadishu ayaa ku sheekeeysta dibida kismayo waa hubeeysanyihiin. Fiiri sawirka 3 aad.
D–Maalintii Talaadada ee 18/9/2016, barqanimadii ayaa mar kaliya qayla aan hore loo maqal laga maqlay agagaarka super cinema, K4, Sanca iyo Bakaaraha ee magaalada xamar. Waxa ay aheed koox Eeya ah oo badanaa halkaa ku noolaa 20kii sanno ee u dambeeysay, kadibna isku soo bax weeyn ayeey ku mareen wadooyinka magaalada ayaga oo ka ashtakoonaya AMISOM oo maalintaa garoonka Aadan Cade ka soo dajisay 200 Eey ( AMISOM Dogs) oo dayaarad gaar ah saaraa ( Fiiri: sawirka 4aad), sida ay warbaahinta guduhu maalintaa sheegtayna loogu talagalay in ay ka qeeyb qaadanayaan nabadgalyada doorashada. Afhayeenkii Eeyaha Mogadishu ( fiiri: sawirka 5aad) ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku yiri: anaga oo ah Eeya soomaliyeed oo muddo shaqa la’aanu ku heeysay dalka ayaa joogna luuqyadana kala naqaan. Side Eeya ajnabi ah shaqa loo siinayaa? Horaa ciidamadii qaranka shaqa loogu diiday oo ajnabi iyo AMISOM lagu bedelay maantana ma Eeya laga keenay Ugandha ayaa shaqadeenii Eeyaha qabanaya ? waa noo doorashada haddi Eey Diasporaa wax ilaalin karo ayuu ku goodiyay. ( wasaarada shaqada iyo wasaarada xanaanada xooluhu ha u doodeen xaqa muwaadiniinta).
E–Mataqaan usbuucan sheeyga loogu iibsan ogyahay Mogadishu? Waa Koofiyada odayaasha.
FG. Akhyaareey yaan loo macneeyn qoraalkan mid ku wajahan shaqsi ama koox gaar ah, waa nasashada jimcaha oo kaliya.